Singapore Feel: ၂၀၁၃ ဆီးဂိမ်းတွင် Red Link နှင့် ရွှေသံလွင် ကုမ္ပဏီတို့ WiFi Free လွှင့်ခွင့် တရားဝင် ရရှိ
ဤ Blog သည် မည်သည့်အဖွဲ့ အစည်းနှင့်မျှ ပက်သက်ဆက်နွယ်မှု မရှိပါ။ Tuesday, February 12, 2013
၂၀၁၃ ဆီးဂိမ်းတွင် Red Link နှင့် ရွှေသံလွင် ကုမ္ပဏီတို့ WiFi Free လွှင့်ခွင့် တရားဝင် ရရှိ
၂၀၁၃ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလအတွင်း ကျင်းပပြုလုပ်မည့် ဆီးဂိမ်းပြိုင်ပွဲ များတွင် Red Link ကုမ္ပဏီနှင့် ရွှေသံလွင် ကုမ္ပဏီတို့ WiFi Free လွှင့်ခွင့်
တရားဝင် ရရှိထားကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။ "ဆီးဂိမ်း ပြိုင်ပွဲမှာ အင်တာနက် အသုံးပြုခွင့်ကို ကျွန်တော်တို့ အခမဲ့ လှူပေးတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအတွက် ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ ကြော်ငြာ ခွင့် တွေလည်း ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်" ဟု Red Link ကုမ္ပဏီမှ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးက ပြောကြားခဲ့သည်။
ယင်းသို့ WiFi ထုတ်လွှင့် ပေးရာတွင် အားကစားကွင်း တည်ရှိရာနေရာ မီဒီယာ စင်တာများတွင် အသုံးပြုနိုင်ရန် အတွက် ဆောင်ရွက် ပေးသွားမည် ဖြစ်ပြီး အခမဲ့ လွှင့်ပေးမည့် နေရာများမှာ ရန်ကုန်၊ မန္တလေး၊ နေပြည် တော်နှင့် ငွေဆောင် အစရှိသော နေရာများတွင် အင်တာနက် အသုံးပြုနိုင်ရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက် ပေးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ထိုသို့ အင်တာနက် အခမဲ့ အသုံးပြုနိုင် ရန် ဆောင်ရွက် ပေးရာ၌လည်း လက်ရှိ မြန်မာ တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာဖြင့် အသုံးပြုလျက် ရှိသော အင်တာနက် မြန်နှုန်း 14G ထက် ထပ်မံပြီး 10G အကျော် အထိ ထပ်မံ လိုအပ်လာဖွယ် ရှိသည်ဟု သိရသည်။ "ဆီးဂိမ်းမှာ အင်တာနက် မြန်နှုန်းကို အကောင်း မွန်ဆုံး ဖြစ်အောင်တော့ ဆွေးနွေး ညှိနှိုင်း သွားမှာပါ။ အခုလို ဆောင်ရွက် ပေးတာဟာ လည်း ပြည် တွင်း၊ ပြည်ပ ပြည်သူတွေ အားလုံး အတွက် အဆင်ပြေအောင် ဆောင်ရွက်ပေး တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်" ဟု ၎င်းက ထပ်မံ ပြောကြား လိုက်သည်။
ဆီးဂိမ်း ပြိုင်ပွဲတွင်လည်း အဝင် အင်တာနက်
ပိုင်းသာမက မိုဘိုင်းဖုန်း များကိုပါ ပြည်ပနိုင်ငံ အသီးသီးသို့ အလွယ် တကူ ဆက်သွယ် ပြောဆိုနိုင်ရန် အတွက် မြန်မာ့ ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်းမှ ဆောင် ရွက်လျက် ရှိသည်ဟု သိရသည်။ လက်ရှိတွင် မြန်မာနိုင်ငံ အနေဖြင့် ဆီးဂိမ်းပြိုင်ပွဲ၌ ကဏ္ဍ စုံလင်စွာ ယှဉ်ပြိုင်မည် ဖြစ်သောကြောင့် လေ့ကျင့်မှုများ ပြုလုပ်လျက် ရှိကြောင်း သိရသည်။ "အင်တာနက် ကွန်နက်ရှင်ကို ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်း အနေနဲ့ နိုင်ငံတကာ နည်းတူ လုပ်ပေးသင့်တဲ့ အချိန် ရောက်ရှိ နေပါပြီ။ လက်ရှိ အနေ အထားမှာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ စိတ်ဝင်စားမှုကို အများဆုံး ရှိနေ တဲ့ နိုင်ငံတစ်ခု ဖြစ်တာကြောင့်လည်း ဒီကွန်နက် ရှင်ပိုင်းဟာ များစွာ အရေးပါ ပါတယ်။ ဆီးဂိမ်း ပြိုင်ပွဲမှာတင် မကပါဘူး။ အမြဲတမ်း ကောင်းမွန်အောင် ပြုလုပ် ပေးသင့်တယ်" ဟု ပြည်တွင်း နည်း ပညာ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင် တစ်ဦးက အကြံပြု ပြောကြားခဲ့သည်။
ယွန်းဝတီလွင်မိုးကို ခိုးပြေးသည်ဟု သတင်း ထွက်ပေါ်ကြောင်း ရေးသား ဖော်ပြခဲ့သည့် Unity ဂျာနယ် ပြန်တောင်းပန်
အပတ်စဉ်ထုတ် ဂျာနယ်တစ်စောင် ဖြစ်သော Unity ဂျာနယ်၏ ဇွန်လ ၂၂ ရက်နေ့ ထုတ်တွင် မျက်နှာဖုံး သတင်းအဖြစ် ဖော်ပြပါရှိသော ‘ယွန်းဝတီလွင်မိုးကို ...
http://www.myanmarexpress.net/2013/02/nld_7633.html တွင် အိအိဖြိုး ဓာတ်ပုံနှင့် ပိုစ့်တစ်ခု တင်ထားပါသည်။ ယင်း ပိုစ့်တွင် အိအိဖြိုး...
ချက်ကြီးနဲ့ ပြိုင်ဘယ်သူနိုင်(မှတ်ချက်-၁၈ နှစ်ပြည့်မှ ကြည့်ပါ)
နာမည်ကြီးနေသည့် ဆီဒိုးနားဟိုတယ် ဗွီဒီယို အပိုင်း(၁) ထွက်လာပြီး ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်လား၊ လူကြီးသား လား မကွဲပြား ကြောင်း ပျံ့နှံ့နေသော ဗွီ...
အမျိုးကောင်းသမီးများသို့ အင်တာနက် မင်းသမီး မဖြစ်ရအောင် ကာကွယ်ဆေးကို ဒီတပတ်ရဲ့ ရွေးချယ်မှု ကဏ္ဍကနေ ပြန်လည် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ အခုခေတ်မှာ...
“၁၅-နှစ်သမီးလေးကို မွေး-စားသော ကုလားကို တရားစွဲဖို့ ပြင်ဆင် ”
(ဖြားယောင်းခြင်း ခံရသော ကလေးမလေး) (တက္ကစီသမား ကိုအောင်အေ...
Sexy Model အဖြစ် နှင့် သာ ရပ်တည် သွား မည် ဟု ဖွင့်ဟ လာ သည့် မော်ဒယ် ဇာဇာထက် က Sexy Post များဖြင့် နိုင်ငံ တကာ ပရော် ဖက်ရှင် နယ် မော်ဒယ...
သန်လျင် နည်းပညာတက္ကသိုလ်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော အင်တာနက် စာမျက်နှာတွင် ပျံ့နှံ့နေသည့် ဗီဒီယိုတွင်ပါဝင်သူ နှစ်ဦးနှင့်မိသားစုများကို တွေ့ဆုံက...
စိုးမြတ်နန္ဒာ သေပီ တဲ့. . ဟုတ်လား ဟင် ? ရီချင်စရာ ကောလဟာလ ဖြန့်မှုတွေ တွေ့ရတယ်။သရုပ်ဆောင် စိုးမြတ်နန္ဒာ တစ်ယောက် … ဇာတ်လမ်း အရ သရုပ်ဆောင်မှု အဖြစ် … အခေါင်းထဲမှာ ပန်းတွေနဲ့ သေဆုံးသ...
ရက်ပိုင်းအတွင်း ရန်ကုန်မြို့ရှိ ကြယ်ငါးပွင့် ဟိုတယ်တစ်ခု ဖြစ်သော ဆီဒိုးနား ဟိုတယ်တွင် လျှို့ဝှက်ကင်မရာ တပ်ဆင်၍ ရိုက်ကူးထားသော ဗီဒီယိုမ...
မှားရင်လည်း ပြင်ဖို့ အသင့်ရှိတယ် ဆိုတဲ့ နန်းသီရိမောင်
၂၀၁၂ သင်္ကြန်မှာ Sexy ကျတဲ့ ဝတ်စားဆင်ယင်မှုကြောင့် အရမ်းဟော့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ လားရှိုးသူ မော်ဒယ်လ် မလေး နန်းသီရိမောင် ဟာ ပရိသတ်ရဲ့ စိတ်ဝင်စားမှုကို ...
“ရိုးရိုးလေးကို ရိုးရိုးလေး စဉ်းစားဖို့ အစိုးရကို တိုက်တွန်းပါတယ်”
ရခိုင်ပြည်နယ် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးမောင်မောင်အုန်းနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ ဘင်္ဂါလီများကို ရခိုင်ပြည်နယ်မှ မွတ်စလ...
ရန်ကုန်မြို့တော် နှင့် ပလက်ဖောင်းဈေးသည်
( စိုးမိုး )
အမျိုးသမီး တစ်ဦးက အထည်တစ်ခုကို ကိုင်ပြီး မြှောက်ကာ၊ ချကာနဲ့ အသံကုန် ဟစ်အော် နေပါတယ်။ လမ်းသွား လမ်း...
ပြည်ပြေးများအတွက် ကမ္ဘာ့ဈေးအကြီးဆုံး မြို့တော်များစာရင်းတွင် ဟောင်ကောင် က ထိပ်ဆုံးမှရပ်တည်
ဟောင်ကောင် ၊ ၂၃-၆-၂၀၁၆
ဟောင်ကောင် သည် Mercer အတိုင်ပင်ခံ လုပ်ငန်းက နှစ်စဉ် ပြုလုပ်သည့် ပြည်ပြေးများ အတွက် ကမ္ဘာ့ ဈေးအကြီးဆုံး မြို့တော်များ စာရင်းတွင် အင...
လူငယ်များ ငယ်ငယ်ရွယ်ဖြင့် ပျက်ဆီးစေသော အရက်သေစာသောက်စားမှုနှင့်ပတ်သတ်ပြီး ဘီယာ အရက်ဆိုင်များအား တရားဝင်အရောင်းလိုင်စင်များအလွယ်တကူ မထု...
မှော်ဘီမြို့ သုဒ္ဓ၀ိပဿ နာရိပ်သာတွင် မေလ ၂ ရက်မှစ ၍ ၁၆ ရက်အထိ အပူရှောင် စခန်းကို ၁၅ ရက်ကြာ ဖွင့်လှစ် မည်ဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိ သည်။အဆိုပါရိပ်သာသည် မရှိ ဆင်းရ...
လည်ပင်းကို သုံးပေလောက်ရှိသည့် သံချောင်းနှစ်ချောင်း ထိုးဖောက် ၀င်ရောက်ခဲ့သော်လည်း ကံကောင်းစွာ အသက်ရှင် ကျန်ရစ်ခဲ့သူက အိန္ဒိယနိုင်ငံသား ဟာမာဆင်းရာပက် ဖြစ်သည...
NLD ပါတီတွင် သာကူးများ ရှိကြောင်း၊ သူခိုးများရှိကြောင်း NLD ပါတီ ဗဟိုနာယကအဖွဲ့ဝင် ဟံသာဝတီ ဦးဝ...
From : .. #‎ဒေါက်တာမျိုးချစ်‬
ဇာတ်လမ်းမလာခင် လိုရာစွဲ စာတမ်းထိုးပြီး အစိုးရမကောင်းကြောင်း မေးခွန်းထုတ်ကာ NLD ကို မဲထည့်ခိုင်းတာ မဖြစ်သင့်ကြောင့် ရေးခဲ့ပြ...
တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်လျှောက်ထားမည့်သူများအနေဖြင့် ဦးစားပေးတက္ကသိုလ်ကို ရွေးချယ်ရာတွင် ပထမဦးစားပေးနှင့်အတူ ဒုတိယဦးစားပေးတက္ကသိုလ်ကိုလည်း ရွေးချယ်လျှောက်ထားရန်လိုအပ်
တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်လျှောက်လွှာပုံစံဖြည့်သွင်းနေ သည့် ကျောင်းသား များအား တွေ့ရစဉ်။
ရန်ကုန်၊ ဩဂုတ် ၂၆-တက္ကသိုလ်ဝင် ခွင့်လျှောက်ထားရာတွင် ကျောင်း သား၊ ကျောင်းသူမျ...
ဘုတ်ပြင်းမြို့ NlD ပါတီစတည်ထောင်ကတည်းက ဒေါ်စန္ဒာသွင် ဆိုသူအမျိုးသမီးဟာ ကိုယ်ကျိုးမဖက် အလုပ်ပါတီအလုပ်အင်မတန်လုပ်တဲ့သူပါ
လော်ခီးလာ ညီလာခံ အကြို အစည်းအဝေး ဒုတိယနေ့တွင် လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အသီးသီး၏ အကြံပြုချက်များ သုံးသပ်
တစ်နိုင်ငံလုံး အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး ညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့ (NCCT)၏ ဒုတိယနေ့ အစည်းအဝေးတွင် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်း များ၏ အကြံပြုချက်များကို ပြန်လည် သ...
မတ်လ ၂၇ ရက် (တပ်မတော်နေ့)တွင် မြေနီကုန်း ခုံးကျော်တံတားပေါ်သို့ ကားများ စတင်ဖြတ်သန်းခွင့်ပြုတော့ မည် ဖြစ်ကြောင်း အဆိုပါခုံးကျော် ...
မတ်လ ၂၃ ရက်၊ ၂၀၁၅
ကချင်ပြည်နယ်၊မန်စီမြို့နယ်၊ကိုင်ထိပ်ကျေးရွာရှိ ဒေသခံရွာသားများအား ကေအိုင်အေအဖွဲ့မှ ဒေသအတွင်း သစ်များအား တစ်ဖက်နိုင်ငံ သို့ မှောင် ခိုရေ...